Iyo nyowani HomePod inogona kusvika gare gare gore rino | Nhau dze iPhone
Iyo itsva HomePod inogona kusvika gare gare gore rino
Apple inogona kunge yakagadzirira kutanga kwe itsva HomePod pakupera kwegore rino sezvakaratidzwa naMing Chi Kuo, kunyangwe zvichiratidza mukana wekuti ichanonoka kusvika kutanga kwa2023.
Pange papfuura gore kubva Apple yakauraya iyo yekutanga HomePod, ichitisiya neiyo HomePod mini chete. Kambani inogara ichizvirumbidza nekutarisira kwayo ruzha uye mimhanzi yakasiya chigadzirwa chayo chepamusoro muchikamu ichi ndokuzviita pasina kuzivisa mutsivi wayo. Uye kwapera gore isu tichiri tisina anotsiva, kunyangwe kumirira kungasvika pakupera. Sezvo Ming Chi Kuo achangoburitsa, Apple inogona kuve neHomePod nyowani yakagadzirira mukupera kwegore rino.
Apple inogona kuburitsa vhezheni nyowani yeHomePod muQ2022 2023 kana QXNUMX XNUMX, uye pamwe haizosanganisire hutsva huzhinji maererano nekugadzirwa kwehardware. Vatauri vakangwara zvechokwadi chikamu chakakosha cheiyo imba ecosystem, asi ndinofunga Apple ichiri kufunga nezve nzira yekubudirira mumusika uyu.
Kuo anotaura nezveHomePod, saka zvese zvinopa vhezheni nyowani yepakutanga HomePod, hombe uye iyo ine ruzha rwemhando yepamusoro, uye iyo inosuwa nevazhinji vedu. Apple mutauri akangwara haana kumbobvira atengeswa zvakanyanya, aine mutengo uri pamusoro pevamwe vatauri vakangwara asiwo neruzha rwemhando yepamusoro kupfuura vazhinji. Chiitiko neHomePod mini chakabudirira zvakanyanya maererano nenhamba dzekutengesa, uye izvi zvinogona kunge zvakapa Apple ruzivo rwekubudirira nemuenzaniso wehukuru hukuru uye mhando. Chatisingatarisire ndechekuti ihurumored hybrid pakati peHomePod neApple TV, iyo ichange ichine nguva refu isati yaziviswa, kana ikamboona mwenje.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo itsva HomePod inogona kusvika gare gare gore rino